Isbeddelka Cimilada Dunida: BIYAHA
BIYAHA IYO FAA’IIDOOYINKOODA
Waa maxay biyo?
Biyuhu waa maaddo dareere ah islamarkaasna aan lahayn midab, dhadhan iyo urtoona. Biyuhu waxay kaloo noqdaan adke (solid) sida barafka iyo hawo (gas) sida uumi-biyoodka; waxayna ka samaysan yihiin molikuullo Haydrojiin (Hydrogen) iyo Oksijiin (Oxygen) ah.
Dhulka aynu ku noollahay (Earth) 71% waa biyo, kuwaas oo 97% ku sugan bad-weynada (Oceans); inta kale oo gaaraysa 3% waxaa laga helaa harooyinka (Lakes), webiyada, daruuraha biyaha xambaarsan, ceelasha, biyo qabatinnada dhulka hoostiisa (Aquifers), dhul-barafeedka iwm. Waxaana la caddeeyaa in 1% ay yihiin biyaha nooluhu heli karo si uu u daboolo baahidiisa isticmaalka biyaha. Taas macnaheeda tusaale ahaan waxaa loo dhigi karaa sidan; haddii biyaha dhulka joogaa ay gaarayaan 100 litir; inta ku habboon (fresh water) isticmaalka noolaha kama badna qaaddo barkeed!!! Halkaas waxaan ka fahmi karnaa baahida loo qabo biyo inta ay le’eg tahay iyadoo biyaha arlada joogaa ay laba jibaar ka badan yihiin berriga.
Biyo Yaraanta Dunida
Biyo yaraan macnaheedu waa in meel laga waayo biyo ku filan baahida noolaha ku nool goobtaas. Taasna waxaa inta badan sababa:
v Baahida loo qabo biyaha oo kororta ( too much demand); taas oo ay ugu wacan tahay kororka tirade dadka, kororka magaalooyinka, kororka wax-soo-saarka beeraha iyo warshadaha iwm
v Iyo biyo ku filan baahidaas (not enough supply) oo aan oollin goobta; taasna ay ugu wacan tahay roob yaraan, abaaro, iyo ceelashii oo gura (wells run dry)
Baahida Biyaha Loo Qabo
Biyuhu nolosheenna muhiim ayay u yihiin; la’aantoodna nololi suurtagal ma ahan; waayo jirka bani-aadamka 75% waa biyo.
Haddaba si aan u ogaanno muhimmadda ay biyuhu inoo leeyihiin waxaan xusaynaa dhawr qodob oo muujinaya sababta biyaha ka dhigtay muhiim. Biyuhu waxaa ay jirka u qabtaan shaqooyinkan:
v Qaboojinta jirka iyo dheellitirka heerkulka jirka gaar ahaan xilliga shaqada
v Caawinta wareegga dhiigga (blood circulation)
v Qoynta isgoysyada jirka (joints) si ay u fududaato habsami u socodka hawlaha jirka
v Taageeridda habka dheef-shiidka (digestive)
v Gudbinta nafaqada (nutrients) iyo Oksijiinta jirku u baahan yahay
v Saaridda wasakhda, sunta iwm, iyo taageeridda mindhicirrada
Haddaba biyo la’aani waxa ay sababi kartaa in gabi ahaanba shaqadii jirku ay istaagto. Sidaa darteedna waa in uu qofku maalin walbaa cabbo 6 ilaa 8 litir oo biyo ah si uu u wanaagsanaado caafimaadkiisu. Biyo yaraantu ama cabbiddooda oo la yaraystaa dhibaatooyinka ay keeni karto waxaa ka mid ah caloosha oo adkaata (constipation), jirka oo qallala (dehydration), kaadida oo yaraata, muruqyada oo tabardarreeya, madax xanuun, wareer iwm.
Faa’iidooyinka Cabitaanka Biyaha
Lama koobi karo faa’iidooyinka biyuhu inoo leeyihiin waayo Ilaahay Subxaanahu Wa Tacaalaa ayaaba noolaha dhammaantiis ka abuuray biyo. Sidaa darteedna waa muhiim in biyaha si fiican loo cabbo si uu u hagaago caafimaadka qofku.
Haddaba qofkii caadaysta cabbitaanka biyaha waxaa uu helaa faa’iidooyin ay ka mid yihiin:
Muuqaal wanaagga jirkiisa
Kororka tamarta (energy) jirkiisa
Xaddididda miisaankiisa (weight control)
Ka hortagga cudurrada iyo xoojinta habka difaaca jirkiisa (immune system)
Iyo fayoobidda guud ahaan jirkiisa
Haddaba iyadoo ay biyuhu inagu yar yihiin, islamarkaasna kororka tirada dadka iyo horumarkuba ay sababaan baahi badan oo loo qabo isticmaalka biyaha; waxaa lagama maarmaan ah in biyaha la dhaqaaleeyo mar walba iyo meel walba.
Dadka dhaqaale ahaan ladan ayaa la sheegaa in ay biyaha six ad-dhaaf ah u isticmaalaan, taas oo la sheego in halkii qoys biyaha ay isticmaalaan ay ku filnaan karaan tobannaan qoys oo danyar ah. Meelaha ugu badan oo biyuhu ku dayacmaan islamarkaasna aan loo aabba-yeelin waxaa ugu horreeya guryaha; halkaas oo lagu isticmaalo in ka badan baahidii loo qabay biyaha. Sidoo kale waxaa biyo badan lagu khasaariyaa inta badan wax-soo-saarka beeraha, waraabinta jardiinooyinka (gardens) iyo weliba dhaqidda gawaarida.
Haddaba biyaha oo la dhaqaaleeyaa waxaa ku sugan faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin:
Waxaa nagu filnaada biyaha
Waxaa naga yaraada biilasha biyaha waxaana noo baaqanaya lacag
Waxaa yaraada cayayaan badan oo ka dhalan lahaa biyaha
Waxaa kordha caafimaadka deegaanka
Waxaa noo baaqanaya biyo badan oo aan wax kale ku qabsan karno
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 7:42 PM